Nezvedu | Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd.
Gore ra2011 rakaona musika wekupenga wezvinhu zvisingawanzoitika zvepasi, kunyanya PrNd neDyFe, zvinova zvinhu zvikuru mbishi zveNeodymium zvisingawanzo magineti epasi. Iko kupenga kwakatyora zvakare kwenguva yakareba kugadzikana cheni uye kumanikidza akawanda magineti ane hukama vatengi kutsvaga yakachengeteka Neodymium magineti vatengesi. Inotungamirwa nezvinodiwa nevatengi, mugore rino Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd. yakavambwa nehunyanzvi timu ine hunyanzvi hwehunyanzvi uye hupamhi hwechiitiko mumunda wemagineti.
Kuti tigone kuzadza zvinodikanwa nevatengi, isu takashongedzerwa neye-ye-iyo-iyo-yekutsvagisa, kugadzira uye kuyedza zvigadzirwa, izvo zvinotibatsira kunakidzwa kwakadzikama asi kuri kuwedzera kukura. Nekuti isu tiri yepakati-saizi kambani inogadzira mazana mashanu matani eNeodymium magineti, isu tinogona kupindura nekukurumidza kune vatengi 'yakakura zvinodiwa nezve magineti uye akasiyana magineti magungano, akadai seNeodymium magineti, shuttering magineti, magnetic chamfer uye isa magineti, hove magineti, chiteshi magineti. , Hoketi magineti, rabha yakavharwa magineti, hari magineti, hofisi magineti, mota magineti, nezvimwewo Kupfuura 85% yemagineti edu uye magineti magungano anotumirwa kuGerman, France, UK, US neJapan, ayo akaomarara muhunhu hunodiwa.
Nekuda kwedu saizi yepakati saizi, isu tinonzwisisa zviri pakati nepakati makambani mamiriro, zvinodiwa uye kuoma. Naizvozvo isu takazvipira kushandira pamwe nekubatsira vatengi vepakati nepakati kuenda kumberi.
Zvakare, akawanda marudzi uye saizi eyakajairika magineti magungano anowanikwa muchitoro kusangana nevatengi 'ingori-mu-nguva dhirivhari inodikanwa.
Iwe unogona kutitaurira nezve yako projekiti uye isu tinogona kukubatsira iwe kubva pane zano kuenda kune serial kugadzirwa. Hazvina mhosva kuti parizvino uri kugadzira, kuvandudza kana mukugadzira, iwe uchave nekugutsikana kuti Horizon Magnetics ine hunyanzvi dhizaini uye timu yekugadzira inogona kupa yakakosha nguva uye mutengo unoshanda matanho.
Horizon Magnetics yagara iri kambani inotyairwa-kukosha. Hunhu hwedu hunoratidza maitiro atinoita bhizinesi redu mukubata nevatinoshanda navo bhizinesi, vashandi uye nzanga.
Basa:Isu tinobata basa redu kune redu ramangwana nenzanga nekuvandudza nekugadzira magineti akanakisa uye magineti mhinduro kuzadzikisa zvido zvevatengi vedu mumusika unogara uchichinja. Isu takazvipira kusimudzira kuzvimiririra uye mweya wechikwata, uye kutora chikamu tichida mukudzokorora, kuongorora uye kugadzirisa nguva dzese maitiro edu ekushanda, kugona uye kugona. Isu tinoziva kuti basa redu kunzanga rakachengetedzwa nekubudirira kwebhizinesi redu. Zvakare, isu tinofanirwawo kukurudzira vatinoshanda navo bhizinesi kuti vatevedze mwero wakafanana wetsika.
Utsanzi:Innovation ibwe rekona reHorizon Magnetics kubudirira. Isu tinotsvaga kurudziro zuva nezuva kubva kumweya wedu wekugadzira uye tinonangana nekugara kuchitsva nekugadzira mhinduro dzisati dziripo uye dzinotevedza nzira nyowani kuitira kuti chiono chanhasi chive chokwadi chemangwana. Isu tinokudziridza tsika yeruzivo, yekutsvagisa uye nekuenderera mberi nekudzidziswa kunovhura hunyowani hutsva kune vatinoshanda navo bhizinesi isu pachedu.
Kururama:Isu tinoona kuenzanirana semamiriro ekubudirira kwekambani yedu patinenge tichitarisana uye nevamwe vatinoshanda navo bhizinesi. Hazvina mhosva kuti uri vatengesi vedu kana vatengi, isu tinofanirwa kukuremekedza uye kuremekedzwa newe! Zvichakadaro isu tinofanirwa kutevedzera makwikwi akasununguka uye emahara nevanokwikwidza.